·9months ago ·35 Comments
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးနှင့် အင်တာဗျူး
Like – 20K Share – 2976
Public Voice TelevisionPVTVPVTV MyanmarSpringRevolutionTheSpringRevolution
2021-04-18 at 4:50 PM
We support National Unity Government (NUG)
Tayzar Tunwinmyint says:
2021-04-18 at 4:53 PM
ပြောတာ ကလွယ်ပါတယ် ရှိကောင်းရှိပါမယ် but ကူးလာဖို့ဆိုတာက ပြောသလောက် မလွယ်ဘူးဗျ
Shwe Yee Tar says:
2021-04-18 at 4:55 PM
ဆရာကြီးနာမည် စာလုံးပေါင်းမှားနေတယ်… ဇော် က ဇော ဖြစ်နေပါတယ်။ ပြင်ပေးပါဦး။
2021-04-18 at 4:58 PM
စစ္​စခန္​း​ေတြ ရဲးစခန္​း ​ေတြအနီးနားမွာသူတို႔ၾကား​ေအာင္​ ​ေလာ္​စပီကာ တတ္​ၿပီး​​ေျပားမယ္​ဆိုတာက​ေတာ့ မျဖစ္​နိုင္​ဘူးဆရာ တျခားနည္​းလမ္​းရွာမွျဖစ္​မယ္​. ဥပမာ စမတ္​ဖံုး​ေတြထဲး စာမက္​​ေစ့ ဘိုက္​စ္​့မက္​​ေစ ပိုမဲ့နည္​းလမ္​း
သံုးမလား အမ်ိဳးမ်ိဳး​ေပါ့ဆရာ ​သူတို႔ကို​ေလာ္​စပီကာတတ္​​ေအာ္​မယ္​ဆိုရင္​ ယမ္​ယမ္​​ေခါက္​းဆြဲးျပဳတ္​တာကမွၾကာ​ေနအံုးမယ္​ လူ​ေရား​ေလာ္​ပါ အိုးစားကြဲးသြားမွာက.
Ei Zin says:
2021-04-18 at 5:13 PM
ပြည်သူလူထုလက်ကမ်းစာစောင်လေးတွေ ကို သူတို့(စစ်သား / ရဲ)မိသားစုတွေဆီကို မသိမသာရောက်စေတဲ့နည်းလမ်းကို ရှာကြံရမယ်
Ngu Kaykhine says:
2021-04-18 at 5:23 PM
ဆရာရယ်… မြန်မာစိတ်ဓာတ်ရှိတယ် ဆိုတိုင်းလည်း…မြန်မာချင်း သတ်ပီးဂျင်းနေကြတာ…ဆရာတို့လို ပညာတတ်လောကပါလတရားကို နားလည်တဲ့လူများတောင် ဓမ္မ နဲ့ အဓမ္မခွဲခြားနိုင်သော်လည်း …ငတေစိတ်များတဲ့လူ‌ေတွအများကြီးကြံုရတယ်…ဆရာ
2021-04-18 at 6:22 PM
လော်နဲ့စစ်သူပုန်တပ်နားသွားအော် သွားဖွင့်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ သပိတ်ဆန္ဒပြတာ ပရိတ်ရွတ်တာတောင်ပစ်ခတ်ဖမ်းစီးနှိပ်စက်နေတာ တစ်ခုတော့ရှိပါတယ် ဒရုန်းနဲ့ လက်ကမ်းစာစောင်ကိုထည့်ပြီး စစ်သူပုန်တပ်ရဲ့အမိုးပေါ်မှာသွားကြဲချတာမျိုးပေါ့ အကြံပေးကြည့်တာပါ ဒါပေမယ့်ဆရာကြီးပြောသလိုသတင်းအမှောင်ပိတ်ခံထားရလို့ဆိုတာတော့ကျနော့်အမြင်မဟုတ်နိုင်တာသေချာပါတယ်ဆရာ
ဒါပေမယ့်အဓိက CDM မလုပ်မပူးပေါင်းဖြစ်တာကတော့ ပထမအချက်၃ချက်ကသာအဓိကဖြစ်ပါတယ်ဆရာရေ အာ့တာကြောင့်အခုလက်ရှိအနေအထားအရ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဥ်လိုက်ဖို့ဆွဲခေါ်တာကောင်းပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဥ်လုပ်ဖို့အချိန်ထပ်ယူနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ နစ်နာလာဦးမှာကပြည်သူနဲ့ ပြည်သူ့အစိုးရပါပဲခင်ဗျာ
Nant Khine Zar Linn says:
2021-04-18 at 6:36 PM
ဆရာပြောသလိုပဲ ဆန္ဒပြတဲ့လူေတွထဲမိသားစုေဆွမျိုးေတွရှိတဲ့အတွက်သူတို့လုပ်ချင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုေပမဲ့ အစ်ကိုတစ်ဝမ်းကွဲကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုပြောတာခံခဲ့ရတဲ့လူပါ
D Phyu Kyaw says:
2021-04-18 at 6:41 PM
မြန်မြန် လုပ်ကြပါဗျာ ကျနော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ ကျနော်တို့အနာဂါတ် လူငယ်လေးတွေကိုယ် ကယ်ပေးကြပါဗျာ ကျနော်တို့ လူငယ်လေးတွေ လမ်းပေါ်မှာ ခွေးသေသလို့ သေနေကြရပါပြီ ကျနော်တို့ကိုယ် ကယ်ပေးကြပါ 🙏ပြီးတောင်းပန်ပါတယ် အင်တာနက်မရတာက ပိုပြီးတော့ဆိုးရွားပါတယ် ကျနော်တို့အနာဂါတ်လူငယ်လေးတွေ နောက်ထပ် လမ်းဘေးမှာ ဘယ်လောက်ထိအသက်ပေးရဦးမှာဗျာ တဂယ် ကျနော်တို့ လူငယ်တွေ အနာဂါတ် ပျောက်နေရပါပြီ😭😭😭 ဟိုတစ်နေ့ကဆိုရင်လဲ ကျနော်ရှိမှာတောင် ကျနော်သူငယ်ချင်း အသက်ပေးလိုက်ရတာပါဗျာ အင်တာနက် သုံးလို့မရတော့ ဆက်သွယ်ရတာ ရမ်းခက်ခဲပါတယ် ကျနော်တို့ လူငယ်လေးတွေ ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲဗျာ လမ်းပေါ်မှာ ခွေးသေသလို့မျိုး နောက်ထပ်မသေချင်းတော့ပါဘူး မြန်မြန်ကယ်ပေးကြပါ🙏🙏🙏
2021-04-18 at 6:44 PM
အရမ်း မှန်ပါတယ်…ဆရာ…သူတို့ ကို CDM ထဲ ဝင်လာရင် သူတို့ စားဝတ်နေရေး သူတို့မိသားစုရဲ့ နေထိုင်ရေး ကိုလည်း တာဝန်ယူပေးမှ ရပါမယ်….ပီးတော့ အရေးအခင်းကြီး ပီးသွားလို့ ဖဒရယ် တပ်မတော်ကြီး ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရင်လည်း သူတို့ရဲ့ မူလ နေရာ မူလရာထူးကို ပြန်ရစေရမယ် လို့ အာမခံချက်လေး ဆရာ့ အနေ နဲ့ ပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်
Wai Wai Q says:
2021-04-18 at 6:48 PM
K Min Hlaing says:
2021-04-18 at 6:58 PM
အသံချဲ့စက် နဲ့ဖွင့်ဖို့က တပ်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာ မလွယ်ဘူး အန္တာယ်များတယ် တခြားနည်းလမ်းနဲ့သိအောင် လုပ်ပေးနိုင်မှ အဆင်ပြေနိုင်မယ်
Nilar Aung says:
2021-04-18 at 7:02 PM
Title ကို သူတို ့စိတ်ဝင်စားမယ့်ပုံစံ
C Obed Sanga says:
2021-04-18 at 7:12 PM
ဆရာပြောတာ ကောင်းပါတယ်။ ရဲနှင့်စစ်သားမိသားစုတွေ သတင်းအမှန်ကို ကြားသိအောင်ပြောဖို့ ဆိုတာ ဆရာပြောသလို သူတို့ကြားအောင် အသံကြယ်တွေသုံးပြီး ဖွင့်ပေးဖို့ဆိုတာ မလွယ်ဘူးထင်တယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ လမ်းထွက်ကြည့်တာတောင် အဖမ်းခံ အရိုက်ခံ အိမ်အဖြတ်ဆီးခံရတွေ ကြုံနေရတာ။ အဲ့လိုဖွင့်ပေးနိုင်မဲ့ သူတွေ အတွက် အခြေနေ မသင့်တော်ဘူး ထင်တာဘဲ ဆရာ။ တခြားနည်းတွေ နဲ့ သူတို့သိအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။ (သတင်းအမှန်းကု် သိသိကြီးနဲ့ မိုက်နေတာတွေတော့ တပိုင်းပေါ့၊ မသိခဲ့ဘူးဆိုမဲ့သူတွေ ရှိခဲ့ရင်ပေါ့)
2021-04-18 at 7:23 PM
အဓိက Internetဖြတ်​တောက်တာ စစ်​ အကြမ်း ဖက်​တွေ အပြင်သတင်းမသိ​အောင် ပိတ်လိုက်တာ ခိုင်းချင်သလိုခိုင်း​တော့မယ်
Zeus Maria Td says:
2021-04-18 at 7:55 PM
ဒီလောက်နမူနာပြထားတာတောင် ၊ ..မျှော်နိုင်သမျှတော့ မျှော်ဦးနော် ။
Andrew Renga says:
2021-04-18 at 8:28 PM
လော်တော့ မလုပ်ပါနဲ့ ဆရာရယ်။ အကုန် နားကားနေပါ့မယ်။
လမ်းကြောင်းမှာ စာတွေ pamphlet တွေ ကပ်ထားတာ၊ ချထားတာ ဆို ကောင်းမလာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တချို့က စာ အဲလောက် ဖတ်ချင်မှ ဖတ်တတ်မှာ။
တိမ် လွှာ says:
2021-04-18 at 9:09 PM
မထင်..ပြန်ပါလာမယ်လို့။ အများစုက စိတ်တူကိုယ်တူ ကိုလုပ်နေကြတာ။ ကျနောကတော့ လက်နက်ချရင်မှပဲ ယုံမယ်။
Nyein Soe says:
2021-04-18 at 9:13 PM
တစ်ချို့စစ်ဗိုလ်တွေက ဖြစ်လာရင်ရှောင်ထွက်သွားမယ်။ Federal Army နဲ့ပူးပေါင်းမလား ဆိုတော့လည်း မပေါင်းဘူးတဲ့။ သူတို့ ရဲ့တလွဲမာနတွေလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဓိက ကပြည်သူ့ဘက်ကရပ်တည်ချင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်မရှိတာ။
2021-04-18 at 9:47 PM
စိတ်ကူးတူတယ်ဆရာ။ ဒါပေမယ့် စပီကာနဲ့ဖွင့်ဖို့ ထက်စာရင် ဆရာ့ဆီက message ကိုလက်ကမ်းစာစောင်တွေ၊ အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေ သွားနေကျ ဈေးတွေမှာ သွားဝေတာတို့ မြင်အောင် အကြီးကြီး လုပ်ပြီးကပ်ထားတာမျိုးတွေဆို ဖြစနိုင်ပါတယ်။ အကြံပြုကြည့်တာပါ။
စစ်တပ်မိသားစုများ သွားလာတတ်သော ဈေးများကို target လုပ်စေချင်ပါတယ်။
Aung Khant Paing says:
2021-04-18 at 10:31 PM
ပြည်သူတွေကိုသနားတဲ့ ရဲတွေရှိနေတယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင််ကြုံဘူးပီးသွားပါပီ
ဒါပေမဲ့လည်း သူတို့လည်း စစ််တပ်ကိုပြန်ကြောက်နေတယ်
2021-04-19 at 12:30 AM
တပ်ထဲမှာက မိသားစုပါ နှစ်ပေါင်းများစွာ brainwash လုပ်ထားတယ်
ရာထူး အာဏာ အခွင့်အရေးပေး
တပ်တွင်းမှာ ဘယ်လိုဆန့်ကျင်မှုမဆို ပြင်းပြင်းထန်ထန် နှိပ်ကွပ်ထားတယ်
တကယ်ဆော်လို့ လုံးဝဥသုံ ငြိမ်ဝတ်ပိပြားတယ်
ကာချုပ်ဆိုတာ တပ်မတော်ကြီးတခုလုံးရော မိသားစုအားလုံးရဲ့ သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်ကြီးပါ.. ဒီလိုပဲလက်ခံထားကြတယ်
ကာချုပ်ဖြစ်တာနဲ့ တမိသားစုလုံး သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်မိသာစု ဖြစ်သွားတယ်
ပင်စင်စား စစ်သား​ဟာင်းတွေက အစ DSA intake များစွာငယ်တဲ့ မအလ ကို ဘုရင်တပါးလို ဦးညွှတ်အလေးပြုတယ် ကာချုပ်မို့လို့တဲ့
မအလစစ်ကောင်စီခေတ်မှာတော့ ပြည်သူအများစု ရဲ့ တော်လှန်ရေး အောင်မြင်မှုတွေက စစ်တပ်အတွင်းစည်းမှာ ထိခိုက်သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာတယ်
မအလ လက်အောက်မှာ သူခိုး သူပုန် ဓါးပြတပ်မတော် အဖြစ် ကုန်းကောက်စရာ မရှိအောင် နိမ့်ကျသွားတာကို မလိုချင်တဲ့ တပ်မတော်သားမိသားစုတွေ ရှိတယ်
စစ်တပ် အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ကြီးပြင်းလာပေမဲ့ငါ့အဖိုး ငါ့အဖေငါ့အမျိုးက စစ်သား ရဲသား တပ်မတော်သားလို့ မပြောရဲလောက်အောင် အခု သိမ်ငယ်နေကြရတဲ့သူတွေရှိတယ်
ပြည်သူ သန်း၅၀ရဲ့ အမုန်းကို မခံချင် တသားထဲနေချင်သူတွေရှိတယ်
ဒါပေမဲ့ ပါဖို့ဆိုတာ လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအသက်နဲ့ရင်း ဘဝနဲ့ရင်းဆုံးဖြတ်ရမှာ
တကိုယ်ရေသမါးက နယ်စပ်ထွက်ပြေးလို့ရပေမဲ့ မိသားစု ပိုင်ဆိုင်မှုရှိသူတွေ အတွက်က ဖေါင်ဖျက်ထွက်ရမှာ
ထွက်လာပြီးမှ ပြန်မိရင် ဘဝပျက်ထောင်ကျ သေဒဏ်ပေးခံရမှာ ဗိုလ်ကြီးအုန်းကျော်မြင့် မိသားစုကိုကြည့်
ထွက်လာတော့လည်း CRPH က CDM ပိတ်သွားပြီမို့ အာမခံ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုက ထိထိရောက်ရောက်ပေးမှာမပေးနိုင်ရင်တော့ လာဖို့ကခက်
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖက်ကူးရင်လည်း အာမခံကြေညာထားတာ မရှိတော့ အရင်က ရန်သူ အခုမှ ကြည်ဖြုမယ်လို့ ဘယ်လိုမှမပြောနိုင်
UK မှာ သံအမတ် CDM လုပ်မယ်ဆိုတာတောင် တပ်ထွက်မို့ သာကူး ဒလန်ဆိုပြီးဝိုင်းကျဉ်ခံရတာ အငယ်တန်း အကြတ်တပ်သား အဆင့် မိသားစုဆို ယင် စစ်ခွေးဆိုပြီး ဝိုင်းဆွမ်းကြီးလောင်းခံရဖို့များတယ်
ဆုတ်လဲရူး စားလဲစူးအတူတူဆိုရင် မလှုပ်မရှုတ်မပြုတ်နေ သူနေမယ်
social punishment ပဲလုပ်လုပ်
အခုတော့ သေနတ်ပြောင်းဝကထွက်တဲ့ အမိန့် သာ အာဏာ ဆိုပြီး ဆက်ပူးပေါင်းနေမယ်
ကမ္ဘာ့စစ်တွေမှာ စစ်သုံ့ပန်းတွေတောင် လူသားချင်းစာနာစွာပြုကျင့်ရမဲ့ စည်းကမ်းတွေရှိတယ်….
တရားဝင်အစိုးရ (NUG) က ဖွဲ့တဲ့ ဖယ်ဒရယ်အာမီပေါ်လာရင်တော့ တတပ်လုံးညီရင် တပ်ရင်းလိုက် လက်နက်နဲ့ ကိုယ့် မိသားစုတွေကို ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ရင်း ပြည်သူတွေနဲ့ ပူးပေါင်းမယ် ကြေညာ ရပ်တည်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်…
အခုအချိန်မှာတော့ တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေ ထိထိရောက်ရောက်ပူးပေါင်းလာဖို့ မမြင်ပါ…
2021-04-19 at 12:37 AM
စာရွက်ရိုက်ပီး တနည်းနည်းနဲ့ သူတို့ဆီ ပို့တာ၊ ကပ်ထားတာ
Nay Kyayl says:
2021-04-19 at 6:48 AM
တပ် သား တွေ ကို သ တင်း ရောက် ဖို့ နည်း လမ်းတွေ FB က နေ ကြော်ငြာ မယ့် အ စား တ ခြား နည်း လမ်း တွေ သုံး ရ မယ်။ နို့ မို့ ရင် စစ် သား တွေ ကို သူ တို့ တပ် ထဲ မှာ ပဲ ဖုံး ပါ သိမ်း ပြီး အ ကျဉ်း ချ ထား သ လို လုပ် လိမ့် မယ်
2021-04-19 at 10:22 AM
CRPH ႏွင့္ NUG အဖြဲ႔၏ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ေဒါတာေဇာ္ေဝစိုး ၏ တပ္မေတာ္ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔အေပၚ စာနာ နားလည္ မူႏွင့္ ေလးစားမူ ကိုၾကားရသည့္အတြက္ သေဘာထားႀကီးျမတ္ေသာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးဆိုတာသိသာေပၚလြင္လွပါတယ္။CD ခ်ပ္မ်ား အတြင့္ ၾကားညႇပ္၍ ထည့္သြင္းျဖန္႔ေဝပါ။စာရြက္မ်ား႐ိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ေဝပါ။ေဒသခံမ်ားမွတဆင့္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားထံေရာက္႐ွိရန္ေဆာင္ရြက္ခိုင္းပါ။ဆရာ၏သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ ႀကီးျမတ္လွေသာလူသားဆန္မူေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မွာပါ။အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ရမည္။
2021-04-19 at 12:09 PM
ကိုယ့်ကို အသုံးချခံထားရမှန်းတောင် မသိကြအောင် မှိုင်းတွေ မိနေခဲ့ကြပါပြီ ဆရာရယ်
ပြည်သူက လစာ ပေးထားတာကိုတောင် သူတို့ တပ်မတော်က လစာပေးထားတာလို့ တလွဲအသိတွေ ရိုက်သွင်းထားခဲ့ကြတာ
Sophia Thahla says:
2021-04-19 at 1:14 PM
Thank you so much dear Sayar Dr.
Shwe Hnin says:
2021-04-19 at 5:27 PM
Ko Thu Rain says:
2021-04-19 at 6:09 PM
မရပါမဖြစ်နိုင်ပါ……..အသိတွေကိုအမုန်းခံပြီးကိုစည်းရုံးခဲ့ပါတယ် သိရက်နဲ့မလုပ်နိုင်သူတွေကိုတော့ထားလိုက်ပါတော့လို့သာ………..အတော်ကိုရွံစရာကောင်းသူတွေပါခင်ဗျာ စည်းရုံးတာကောင်းပေမယ့်ထပ်ခါထပ်ခါခေါ်နေတာကတော့အဆင်မပြေတော့ပါဘူးခင်ဗျာ
2021-04-19 at 6:12 PM
ဇွန် မိုး သား says:
2021-04-19 at 10:37 PM
Aye Zayar Htun says:
2021-04-20 at 3:26 AM
ဆရာ ကုိ ေဝးဖန္ ရင္ လဲ က်ေနာ္ က ဒလံ လုိေျပာခံရမယ္ ဝန္းႀကီး တစ္ေယာက္ အေန န့ဲ ျပည္သူလူတု ကုိ sms ေပးတ့ဲေနရာမွာ ဆရာ ပဲျပန္စဥ္စားၾကည့္ပါ ဆရာ တုိ႔ လုိ ကမၻာ န့ဲ အင္အာႀကီး အေနာက္ႏုိင္ငံေတြ U. S /UN တုိ႔ န့ဲ ခ်ိတ္ဆက္ပီးလုပ္ေနတ့ဲ သူေတြေတာင္ အျပင္ထြက္လာလုိမရေသးဘူး ဆရာ တုိ႔ ဝန္ႀကီး႐ုံေတာင္ ဆရာ တုိ႔ သြားထုိင္လုိမရေသးဘူး
ရဲစခန္႔ / စစ္တပ္ဝန္ အေ႐ွ႕ေတြ သြားပီး ေလာ္န႔ဲ အသံခ့်ဲစက္သြားဖြင့္ရမယ္ဆုိသာ ျဖစ္ႏုိင္လာ စဥ္စင္စားစားေျပာပါ အုန္း plz
March Togoal says:
2021-04-20 at 7:54 PM
loud speaker နဲ႔ က နယ္ျခားစည္းမရွိလို႔( ေတာင္/ေျမာက္ ကိုရီယားလို) မျဖစ္နိုင္ပါ ။ ဖ်က္ဆီးနိဳင္ သိမ္းဆီးနိဳင္ အေရးယူ ခံရႏိုင္ပါတယ္ ။ memoey cards (sd cards ) included videos , sounds . pdf files ., ေတြကို တပ္တြင္းတပ္ျပင္ နည္းလမ္းစုံနဲ႔ ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ရင္ ပိုထိေရာက္မယ္ ထင္ပါတယ္ သူတို႔လက္ထဲမွာ ph ေတြကအခုခ်ိန္ ေပါမွေပါ
ပါခင္ဗ်ား ။ ္
2021-04-29 at 3:44 AM
2021-05-03 at 12:03 AM
Crying Back pack (April 18/2021)